ပြည်သူလူထုကို လွယ်လွယ် ကတိမပေးဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ထောက်ခံမှု ယူသွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား | NEW BURMA MEDIA
ပြည်သူလူထုကို လွယ်လွယ် ကတိမပေးဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ထောက်ခံမှု ယူသွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ပြည်သူလူထုကို လွယ်လွယ် ကတိမပေးဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုယူသွားမယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကော့မှူးမြို့နယ်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စည်းရုံးရေးအဖြစ် သွားစဉ်အတွင်း ၀ါးသိင်္ခရွာမှာ လူထုကို အခုလို ပြောလိုက်တာဖြစ်သလို မြို့နယ်တွင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း အရင်ဖြေရှင်းပေးရေးဟာ ပထမဆုံး တာဝန်တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီကနေ့ ကော့မှူးခရီးစဉ်အကြောင်း မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီက ၀ါးသိင်္ခရွာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုကို ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါးသိင်္ခရွာကနေ ကော့မှူးက ငှက်အော်စမ်း မှာရှိတဲ့ လူငယ်သင်တန်းကျောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက် သွားခဲ့ပါတယ်။
လှိုင်သာယာကနေ တွံတေးမြို့ကို ဖြတ်ကာ ကွမ်းခြံကုန်းနဲ့ ကော့မှူးမြို့ကိုသွားတဲ့ လမ်းတလျှောက် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံလူထုတွေက ကြိုဆိုကြတယ်လို့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း လိုက်ပါ သတင်းယူနေတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းထောက် တစ်ဦးကလည်း အခုလို ပြောပြပါတယ်။
« မင်းကမင်းငါကငါ You are you! I am Me! (Animation Joke)
ရန်ကုန်ဟိုတယ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးတွေရဲ့ ဒုက္ခ »